ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ အံ့ဖွယ် ၉ ပါး | Htet Myint Oo
Htet Myint Oo
Posted by Htet Myint Oo at 3:43 PM
အကြိမ်ကြိမ် ရောက်သည်။ သို့သော် အံ့ဖွယ် ၉ ပါး စုံအောင် တစ်ခါမှ မရောက်၊ ဘယ်နားမှာ ရှိမှန်း မသိ တာ လဲ ပါမည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်စေရန် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
(၁) တ၀ဂူ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား (သို့) ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရား (အံ့ဖွယ် ၁ -တနလာင်္ထောင့်)
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အထက်ပစ္စယံ အေ၇ှ့ ဘက်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုတ၀ဂူဘုရားသို့ အမျိုး သား များ သာလျှင် တက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ရပြီး၊ အမျိုးသမီးများ မဖူးမြော်နိုင်သော ဘုရားဟုလည်း ဆို လျှင် မှားမည်မဟုတ်ပေ။ တ၀ဂူ ပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရားဟုလည်းခေါ်တွင်လေသည်။ဆုတောင်းပြည့် တ၀ဂူု ဘုရားသည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည့်အတွက် ဆုတောင်းပြည့်သည်ဟု အလွန်ယုံကြည်ကြသည်။ ရှေးအခါက မင်းညီ မင်းသားများသည် တ၀ဂူ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကို တက်ပြီးဆုတောင်းဆုယူပြုလုပ်ကြသည်။ သစ္စာ အဓိဌာန်ပြု လုပ်ကြသည်။ ပြုလုပ်သည့်အတိုင်း အောင်မြင်ကြသည်။ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ပြီး နန်း ရပ် ထီးဖြူလုယူကြသည်။ ထီးနန်းအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ကြသည်။ သို့အတွက် အချင်းချင်းမသတ် ဖြတ်စေရန် ကြီးစဉ် ငယ်လိုက် မင်းလုပ်စေရန်အတွက် မင်းညီမင်းသားများ တ၀ဂူဆုတောင်းပြည့်ဘုရား မဖူးမြော်ရဟု ဘုရင် များက အမိန့်စာချွန်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရလေသည် ဟုမှတ်သားခဲ့ရဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် တ၀ဂူ ဘုရား ကို လူတိုင်း အလွယ်တကူ မဖူးမြော်နိုင်စေရန် ဆုမတောင်းနိုင်ကြစေရန် တ၀ဂူဘုရားကို အထက် ပစ္စယံ လူသူအရောက်အပေါက်နည်း သော နေရာတွင်လျှို့ဝှက် တည်ထားကိုးကွယ်ကြသည်ဟု ပြောသ မှတ်ပြု ကြ ပါသည်။
(၂) ၀ိဇ္ဖာဇော်ဂျီဘုရား (အံ့ဖွယ် ၂ -- နေလဘုရား အရှေ့ဘက်မှာ ရှိပါတယ်... ဒီဘုရားက ပန်းမဦး ဘူးလို. သိရပါတယ်... ဘယ်လောက်စောစောထပြီး ပန်းလှူလှူ.. ပန်းလှူပြီး သားဖြစ်နေတာ ကိုပဲတွေ.ရလို.ပါတဲ့ )
ရွှေတိဂုံကုန်းတော် ရင်ပြင်တော် စနေထောင့်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ စေတီငယ်ပေါ်တွင် ဇော်ဂျီရုပ် များ ပြုလုပ်ထား သည်ကို တွေ့ရသည်။ လောကီပညာရပ် အစီအမံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဘုရားဟု သိရှိ ရလေ သည်။
(၃) ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား (အံ့ဖွယ် ၃ - ရှင်စောပုဘုရား ....၁၂ရာသီပတ်လုံးပန်းပွင့်ပါတယ်တဲ့)
ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်တော် ရာဟုထောင့် သံတန်ဆောင်းကြီး နံဘေးတွင်တည်ရှိတသည်။ အချို့ က ဘားလးဘား ဘုရား ဟုခေါ် ကြသည်။ ရှင်စောပုစေတီဟုလည်းတွင်သည်။ ဘုရားအနီးတွင် စကားစိမ်း၊ စကားဝါစသော စကားပင်လေးပင်ရှိသည်။
(၄) ရှင်မထီးဘုရား (အံ့ဖွယ် ၇ --ပညာရေးကောင်း)
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရားမြောင်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်း (ရှင်မထီး တန်ဆောင်း) တွင်းရှိဘုရားဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀-ခန့်က ရှင်မထီးဆရာတော် တည်သွား သည့် ဟုပြောသည်။
(၅) ရှင်အဇ္ဖဂေါဏဘုရား (အံ့ဖွယ် ၅ --- ရှင်အဇ္ဖဂေါဏ နဲ.ရှင်မထီးဆရာတော် ကိုတော်၂များများက တစ်ပါး ထဲ လို. မှားတတ်ကြ ပါတယ်... ရှင်အဇ္ဖဂေါဏက ပုဂံပြည်ကိုပထမဆုံးစတည်ထောင် တဲ့ သမုဒ္ဒ ရာဇ်မင်း လက်ထက်မှာပေါ် ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပါ.... ရှင်မထီး ဆရာတော်ကတော့ ပျူစောထီးမင်း လက် ထက် မှာပေါ်ပေါက် ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပါ.. အဂ္ဂိရိတ်သမားတွေအတွက်အလွန်အားထားရတဲ့ ရှင်မထီးကျမ်း ကိုပြုစုခဲ့တဲ့ သူပါ.)
ရွှေတိဂုံဘုရား ရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရား၏ တောင်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်း တွင်း ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။ ရှင်အဇ္ဖဂေါဏကား ဆိတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်၊ နွားမျက်လုံးတစ်ဖက် ရှိသော ကိုယ်တော် ဟု ထင်ရှားသည်။ အဂ္ဂိရပ်တန်ခိုးဖြင့် ပုဂံခေတ်က ရွှေမိုး ငွေမိုး ရွာအောင်စောင်မခဲ့သော ကိုယ်တော် ဟုလည်းေ၇ှးဟောင်းသမိုင်းစာပေတို့တွင် ဆို၏။ ဆရာတော်က ၄င်းတည်ခဲ့မှန်း လူများသိစေ ရန် မျက်လုံးတော် တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ် ထုလုပ် သွားကြောင်းအဆိုရှိသည်။ ထိုအာရုံခံ တန်ဆောင်း ရာဟုထောင့် (၀ါ) အနောက်မြောက်ထောင့်ရှိ ရုပ်ပွါးတော်မှာ မျက်လုံးတော် တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက် ကျယ် အရွယ်ချင်း မတူအောင်ပြုလုပ်ထားလေသည်။
(၆) ဆံတော်တွင်းရုပ်ပွားတော် (အံ့ဖွယ် ၄ -လပြည့်လကွယ်နေ. များတွင်ရေ သံကြားရသည် ဟုဆိုကြပါ သည်)
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော ဆံတော်တွင်း တန်ဆောင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဆံတောင် တွင်း တန်ဆောင်းမှာ ဒဂုံခင်ခင်လေး၏ ကောင်းမှုဖြစ်သော မဟာဗောဓိစေတီ၏ အနောက် ဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီကို တည်စဉ်က ဆံတော်များဆေးကြောသည့် တွင်းဖြစ် သည်ဟု မှတ်သားကြလေသည်။
တန်ဆောင်းတွင်းရုပ်ပွားတော်အနောက်တွင် ယခင်နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော်က ဆံတော်တွင်းသို့ဆင်းရာ ဥမင် လိုဏ်ခေါင်း ရှိသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။ ဆံတော်တွင်းမှ ရေသည် ဧရာဝတီမြစ်ရေနှင့် တစ်ကြော တည်းဖြစ်သဖြင့် ဒီရေအတက်အကျရှိတိုင်း ဆံတော်တွင်းတွင်လည်း အတက်အကျရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဆံတော် တွင်း အုတ်ပြသာဒ်ကို ငုံပြီး ၁၈၇၉ ခုနှစ်က တန်ဆောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့လေသည်။
(၇) ဘိုးဘိုးအောင်ဘုရား (အံ့ဖွယ် ၆ - ဘိုးဘိုးအောင်ဂူဘုရား)
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အရှေ့မုခ် အနီးရှိ ဘိုးဘိုးအောင်တန်ဆောင်း ဘုရားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဆောင်း အတွင်း ရှိ ရုပ်ပွားတော်ကို ဘိုးဘိုးအောင် တည်ရစ်သည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။ ဘိုးဘိုးအောင် တန်ေ ဆာင်း အနောက်ဘက်တွင် ကျောချင်းကပ်လျှက် ရှိသည်ကား ဓမ္မစေတီ၏ ကောင်းမှုတောင်စေ တီဖြစ်သည်။ ဓမ္မစေတီဘုရားရှေ့တွင် ခြင်္သေ့နှင့် ကျားရုပ်ရှိသည်။
(၈) လက်ပက်လက်ဘုရား (အံ့ဖွယ် ၈ - တနလာင်္ထောင့်မှာ ရှိပါတယ်.. .လာဘ မုနိ ဘုရားလို. လဲခေါ်ပါ တယ်.. ကျန်းမာရေး ညံ့ရင် ထိုဘုရားမှာ ဆုတောင်းပါတဲ့)
ရွှေတိဂုံစေတီတော်အရှေ့မုခ် အာရုံခံတန်ဆောင်းအတွင်းတွင် ရှိ၏။ ကကုသန်ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။လိုဏ် အတွင်းရှိ ကကုသတ်ဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော်၏ လက်ယာဘက် လက်တော်မှာ အခြားဘုရားများ ထုစဉ် ကဲ့သို့ လက်မှောက်ခုံမဟုတ်ဘဲ လက်တော်ပက်လက်ထားပြီး ထုထားသဖြင့် လက်ပက်လက် ဘုရား ဟုခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိလေသည်။
(၉) ပြဒါးရှင်ဘုရား (အံ့ဖွယ် -၉)
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် အရှေ့မုခ်နှင့် အင်္ဂါထောင့်အကြားရှိစေတီတစ်ဆူ၏ တောင်ဘက်မုခ်အတွင်းရှိ ကြေး ဆင်း တုတော်ဖြစ်သည်။ အလွန်အချိုးအစားကျနပြေပြစ်လှသည်။ နဖူးတော်တွင် မို့မောက်နေပြီး ပြဒါးရှင် လုံး ဌာပနာထားသည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိ၏။ ပြဒါးရှင်လုံးရှိသည် မရှိသည်ကား အသေအချာ မသိရသော် လည်း အဆိုပါကြေးဆင်းတုတော်မှာ ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ်ရှိ ဆင်းတုတော်များအနက် အလွန်ကြည်ညို ဖွယ်ကောင်း လှသော ဆင်းတုတော်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖူး ဖူးသူတိုင်း ၀န်ခံရပေသည်။
ထို အံ့ဖွယ် ၉ ပါးအပြင် နေလ ဘုရား၊ ပိတုန်း ၂ ကောင်ကို တစ်ဖက်စီ ကိုင်ပြီ ဆုတောင်းရသော ဘုရားများ လည်း ရှိသေးသည်။ ရွှေတိဂုံရောက်သည့် အခါ စုံအောင် ဖူးနိုင်ပါစေ။
0 comments to “ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ အံ့ဖွယ် ၉ ပါး ”
Like ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ
ဆရာ ဦးသိန်းဆိုင်ရဲ့ အရမ်းနှစ်သက်မိတဲ့ ကဗျာကောင်းေ...
မြန်မာ ဂျာနယ်များ ဒေါင်းရန်
ဘလော့သို့ ကြွလာ မိတ်သဟာများ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သုံးဆေ...
ဆိုဒ်ကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပို့ချင်ရင်
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Game Download Websites များ ယနေ့...
Google ကို မြန်မာ domain .com.mm မှ မူရင်း .com သိ...
ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကို ဘယ်သူတွေ ၀င်မွှေသွားလဲ စစ်ကြည့်...
ကွန်ပြူတာက အချိန်တွေကို ပြောပြနေစေချင်တဲ့အခါ
Facebook ထဲက သူငယ်ချင်းရဲ့ Email သိချင်သူများအတွက်...
ကီးမလိုတဲ့ IDM 6.15 လေး
မိမိဖုန်းရဲ့ တည်နေရာနဲ့ အင်တာနက် speed သိချင်သူမျာ...
ကွန်ပျူတာသမားတွေ သတိထားသင့်တဲ့ ဝေဒနာများ
မန်ယူပွဲ ကျပ် ၁၀၀၀ ဖြင့် ကြည့်နိုင်
ဆိုင်ကလုန်း မဟာစင်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၀င်ရောက်
Facebook အကောင့် Lock မကျအောင် ဒီလိုကာကွယ်ထားပါ
ဖုန်းထဲကနေ google earth နဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုကြည့်မယ်...
မြန်မာ ebook များ စုစည်းမှု
ကွန်ပျူတာဖြင့် 'ခြင်' နှိမ်နှင်းနည်း တကယ် အသုံး...
တိုတိုထွာထွာ နည်းပညာစာအုပ်များ ........
အသံ Spy လုပ်ချင်တဲ့ သူများအတွက်
ကျော်ဇင်(အောင်လံ) ရေးသားသီကုံးထားသည့် “လွမ်းရပါသည်...
*“ဂန္တ၀င်”* မှန်လုံခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုသတင်...
ပုညရှင်စေတီ ဓမ္မာရုံကျောင်းတွင် ဆရာတော်(၁)ပါး ဓါးထိ...
ပြည်-အောင်လံ လမ်းပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ်တိုက်မှုသတင်း
တန်ဖိုးနည်း ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းကဒ်များတွင် Ring Tune အသု...
ကွန်ပျုတာသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနိုင်...
ချစ်သူပုံလေးတွေကို Wallpaper Slide လုပ်ချင်သူများအ...
မြစက်တော်ရာတောင်တော် ပုံရိပ်များ ၁
မန်ယူပရိသတ်များနှင့် အသင်းသားများကို နှုတ်ဆက်စကားေ...
လျှိုဝှက်ကင်မရာဖြင့် အရိုက်မခံရရန် ကူညီမည့် AES Ca...
ဓါတ်ပုံတွေကို ဘက်ဂရောင်း လှလှလေးတွေနဲ့ သုံးချင်သူမ...
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေ ဖန်တီးချင်သူမျာ...
ကိုယ့်ရဲ့ password လေး လုံခြုံမှုရှိမရှိစစ်ရအောင်.....
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးများ အတွက်
Phone အချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးချင်သူများအတွက်
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းနဲ့ မြန်မာ့အားကစား အလားအလာ
မိမိဖုန်း screen ကိုလက်လေးပြယုံနဲ့ ပိတ်ပေးမဲ့(Prox...
1500 တန် CDMA 800 MHz လိုင်းကဒ်များအတွက် Internet ...
Facebook မှ photo တွေကို ဖုန်းထဲသို့ download လုပ်...
photoshop ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် ၀တ်စုံလေးများ
ဂီတာဝါသနာပါသူနဲ့တီဝိုင်းသမားများအတွက် Effect ချိ...
သံစဉ်ရှာ သီချင်းရေးသူ သီဆိုသူ ဂီတသမားများအတွက် စာအ...
ဗေဒင်ဝါသနာရှင်များအတွက် စံဇာဏီဘိုရဲ့ 2013 တစ်နှစ်စ...
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတွက် သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်း (...
အောင်လံမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုပြ မြေပုံ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ အောင်လံမြို့နယ်၏ေ...
Zawgyi Keyboard Layout (For 64-bit)
Zawgyi-One for 32-bit
blog ဆိုင်ရာများ (1)
ဗီတာမင် စာစုများ (7)
ဥပဒေစာအုပ်များပေါင်းချုပ် ဥပဒေစာအုပ်တွေကို သည်လို တနေရာတည်းပေါင်းစုပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်... လိုခင်ြသူများလည်းအဆင်ပြေစေဖို့ အတွ...
မင်္ဂလာပါဗျာ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ-- မြန်မာအင်္ဂလိပ် အဘိဓန် လိုချင်သူများအတွက် အဘိဓာန်နှစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ...
Facebook ထဲက သူငယ်ချင်းရဲ့ Email သိချင်သူများအတွက်
Facebook ထဲက သူငယ်ချင်းရဲ့ Email ၊ မမေးပဲနဲ့ သိချင်သူများအတွက် တချို့တွေကျတော့ facebook ထဲက သူငယ်ချင်းကို facebook ထဲကနေပဲ mess...
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. အရမ်း ကို Smart ကျတဲ့ Links .. --------------------------------------------------------------------------...
မြန်မာ ဂျာနယ်များ ဒေါင်းရန်7Days News 7Day Shopping Guide Digital Life First Eleven Flower News Good Health Hot News ...
ကိုးနဝင်းအဓိဌာန်ပုတီးစိတ်တဲ့ Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် ကိုးန၀င်း (9NaWim) လို့ခေါ်တဲ့ Android ဖုန်း application လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေ...
ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ အံ့ဖွယ် ၉ ပါး အကြိမ်ကြိမ် ရောက်သည်။ သို့သော် အံ့ဖွယ် ၉ ပါး စုံအောင် တစ်ခါမှ မရောက်၊ ဘယ်နားမှာ ရှိမှန်း မသိ တာ ...
မြန်မာ ebook များ စုစည်းမှု စာအုပ်အမည် = Window 8 ကိုလေ့လာခြင်း ရေးသားသူ = သရ ဒါကတော့ window 8 အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ...
ဆိုင်ကလုန်း မဟာစင်ဟာ ဒီနေ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံရဲ့ မြေနိမ့် ကမ်းရိုးတန်းကို စတင်ဖြတ်ကျော်ပြီး စစ်တကောင်းနဲ့ ကောက်ခ်စ်ဘဇား ဆိပ်ကမ်းတွေဆီကိ...
ဖုန်းမှာ ဖတ်ချင်သူများအတွက် ဒီမှာဒေါင်းပါ
Htet Myint Oo Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger